काठमाडौं, १ चैत/ चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
शीतलनिवासमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग शपथग्रहण लिएलगत्तै सिंहदरबार पूगेर पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शन्ति, सुव्यवस्था कायम गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहयोगमा चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
यस्तै रेग्मीले दलहरूले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीप्रति आभार व्यक्तसमेत गर्नुभएको छ । ७ असारसम्ममा चुनाव गराउनेगरी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा उहाँलाई राष्ट्रपछि डा. रामवरण यादवले शपथग्रहण गराउनुभएको हो ।
रेग्मीसहित अरू दुई मन्त्रीले पनि शपथग्रहण गरेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले गृह र पराष्ट्र मन्त्रालय र हरिप्रसाद न्यौपानेले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी शपथग्रहण गर्नुभएको छ ।
यस्तै शपथग्रहणपछि रेग्मीले लैनचौरस्थित सहिदपार्कमा गएर सहिदहरूको सालिकमा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो ।
दलहरूबीच लामै रस्साकस्सीपछि अन्तत: प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको हो । आज तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिए पनि मन्त्रिपरिषदमा ११ जना सदस्य हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनमै पूर्णता पाउने बताइएको छ ।